Saturday October 10, 2020 - 11:38:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Caabuqa halista ah ee Covid19 ayaa shalay musiibadii ugu darneed ka geystay wadamo badan oo dhaca qaarada Yurub arrinkaas oo saameyn xun ku reebay muwaadiniinta wadamadaasi.
Wararka imaanaya Yurub ayaa sheegaya in xaalad adag ay kajirto wadamo ay kamid yihiin Faransiiska iyo ingiriiska kadib markii lasoo calaamadeeyay labaatameeyo kun oo kiisas cusub Carona Virus ah.
Markii ugu horraysayna maalintii Jimacaha Yurub waxay tirisay in ka badan 100,000 oo kiis oo fayraska ah hal maalin iyada oo loo eegayo kororka cudurrada ee shantii maalmood ee lasoo dhaafay dalal ay ka mid yihiin Ingiriiska, Ruushka, Faransiiska iyo Jarmalka.
Kiisaska ayaa kusii kordhayay Yurub oo dhan toddobadii maalmood ee la soo dhaafay inkasta oo faafitaanka cudurku ku faafay qaar ka mid ah waddamada ugu badan ee uu cudurku ku dhacay, sida Hindiya iyo Brazil, ay bilaabeen in ay yaraadaan balse Yurub sidaas ma ahan oo cudurka ayaa fara ba'an ku haya.
Yurub oo tirada dadka uu ku dhacay cudurka ay sii caga cagaynayso 6.2 milyan ayna dhinteen 240,000 ayaa diiwaan gelisay kororka ugu badan ee tirada caabuqa, iyadoo kororka uu yahay 28%, halka Aasiya ay noqotay gobolka kaliya ee adduunka laga diiwaan geliyey hoos u dhac 7% ah, sida lagu sheegay tirakoob ay sameysay wakaaladda wararka Faransiiska.
Ingiriiska ayaa diiwaangeliyey 22,000 oo bukaan hal maalin kadib dib u eegista tirakoobka Faransiiskuna wuxuu tiriyay 18,000 oo bukaan, tirada maalinlaha ee Jarmalka iyo Talyaanigana waxay kor u dhaaftay 4,000 markii ugu horreysay bilo kadib xiligaas oo Covid19 uu halaag ka geystay labadaan wadan , sidoo kale lambaro Carona ah oo aan yarayn ayaan lagasoao calaamadeeyay wadamada Swizerland iyo jamhuuriyadda jeeg.
Dowlado ay kamid yihiin Ingiriiska iyo Spain ayaa bilaabay in ay tallaabooyin ad adag oo dhanka socdaalka ah kusoo rogaan muwaadiniintooda kadib markii tirada bukaanada ay sare usii kaceen